Dibadbaxyo hor leh ayaa Maanta ka bilowday Magaalada Diridhabe - Awdinle Online
Dibadbaxyo hor leh ayaa Maanta ka bilowday Magaalada Diridhabe
November, 13, 2019 (AO) – Waxaa saaka abaaro 8:00 subaxnimo ayay rabshado ka bilowdeen aagga Konel, Magaala, rabshadahan ayaa u dhaxeeya dhalinyaro Oromo iyo Axmaaro ah.
Sida ay warbaahinta u sheegeen dad ka ag dhaw meelaha ay rabshaduhu ka socdaan waxaa xidhan oo albaabada loo laabay goobihii ganacsi ee ku yaalay Konel iyo Magaala, sidoo kale waxaa iyana xidhan suuqa u wayn ee Taywanka.
Sida la xaqijiyey Waxaa jira dhaawacyo labada dhinac ah, iyadoo gaadiidka gurmadku uu aad usocdo goobaha ay rabshadu ka socoto. Waxaa mid aad loola yaabo noqotay inaysan wax Ciidan ah oo jooga meelaha ay rabshaddu ka socoto aysan jirin.
Weli lama xaqiijin waxa sababay rabshadahan maanta ka bilowday Diridhabe, inkastoo xurguf waayadan u dhaxaysay labada dhalinyaro ee Oromada iyo Axmaarada.
Previous articleXildhibaan C/Fataax “Amarka Mobil-Keyga Lagu Jabiyey Waxaa Bixiyey Taliyaha Ciidanka Booliska “.
Next articleDeegaanno Ka Tirsan Gobollada Galgaduud Iyo Hiiraan Oo Xaalufiyay Ayax